Imicimbi yezemidlalo eyeqisayo nemincintiswano - i-ULLER
Abathandi bezokuzijabulisa bayazi ukuthi i-adrenaline imane nje iyisidakamizwa. Ukwenza impilo yethu ibe semikhawulweni ngemidlalo ye-adventure nemidlalo eyeqisayo sekuyinto ebalulekile empilweni yansuku zonke yalowo ozibonela izinto ahlangana nazo ngezikhathi ezinzima kakhulu, ikakhulukazi lapho ebamba iqhaza emincintiswaneni lapho asikhombisa khona amakhono namakhono abo izingozi.
Yimiphi imincintiswano eyeqisa kakhulu?
I- imicimbi yezemidlalo eyeqisayo, imikhosi nemincintiswano zipholile impela! Kuningi emhlabeni, kusukela kokungajwayelekile nokudala kakhulu, kuya kokwakudala nokuyinganekwane. Kulowo nalowo wabo siyakwazi ukubona izigebenga zezemidlalo nezethembiso ezintsha ubuso nobuso ziphonsela inselelo amandla emvelo, iziqongo eziphakeme kakhulu, amagagasi anonya kakhulu, nemigwaqo emide futhi eyingozi kakhulu.
Uyazazi ezinye zazo? Funda futhi ufunde ngeminye yemicimbi ehamba phambili futhi eyeqisayo, imikhosi kanye imincintiswano ye-adventure emhlabeni wonke!
Uma uthanda imidlalo eyedlulele ne-freestyle, khona-ke ngaphandle kokungabaza uyayithanda i-X-Games ngendlela esenza ngayo! Lesi silo semincintiswano yezemidlalo eyeqisayo sihlanganisa ngokuphelele uthando, isenzo nomculo, sihlanganisa ndawonye ochwepheshe bezemidlalo abavela emhlabeni wonke ngezigaba ezahlukahlukene. Konke lokhu ngaphansi kokuqondisa kweqembu le-ESPN, ngoba umncintiswano wadalwa ngo-1995.
Isebenza kanjani Imidlalo ye-X?
I-Los X Imidlalo zenziwa ngendlela ethile. Izimbangi zibamba iqhaza ngokuwina izindondo zegolide, zesiliva nezethusi, kanye nemali yomklomelo. Kodwa-ke, bancintisana kakhulu nodumo olutholakala ngokuba phakathi kwezikhundla eziphezulu kulo mncintiswano, odume umhlaba wonke.
Njengoba sibonile emidlalweni yama-Olimpiki, kunezinhlobo ezimbili zama-X Games: ubusika kanye ezasehlobo. Ku-repertoire yomncintiswano ehlobo sithola i-Skate, i-BMX, i-motocross, i-freestyle, i-roller, i-rally, i-scootering (i-skateboard) ne-surfing, nokujaha ngezimoto. Futhi ebusika i-X-Games uncintisana nokushibilika eqhweni, ukushushuluza eqhweni naseqhweni.
Enye into enhle mayelana X Imidlalo ukuthi izinhlobo zayo ezahlukahlukene azihlali njalo zisendaweni eyodwa, ngakho-ke ithambekele ekubeni sezindaweni ezihlukene emhlabeni, ukusuka eCalifornia kuye eJapan. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganiswe nomkhosi odumile onikeza umculo obukhoma "X Fest" enikezayo amaseshini we-autograph nabasubathi neminye imisebenzi yababukeli, abalandeli kanye nabancintisana ngokwabo.
UHLELO LOKUQHAWULULA LWE-ABANCA GALICIA CLASSIC SURF
Yini iPantin Classic?
Phambilini yaziwa njenge "Pantin classic" noma "Galicia Surf Pro", iGalicia Classic Surf Pro ibanjelwa olwandle lwasePantín, eValdoviño (esifundazweni sase-A Coruña) njengengxenye yesifunda se I-World Surf League (WSL).Lapho, abaphezulu be-surfing emhlabeni bahlangana bukhoma futhi baqonde ngesikhathi sovivinyo olunzima lwe-QS 10.000, oluthi kungumqhudelwano obaluleke kakhulu wesifunda sonke saseYurophu.
El I-Abanca Galicia Classic Surf Pro,okusebenze eminyakeni eyedlule ngaphansi kwePraia de Pantín Club (ene-ABANCA njengomxhasi wayo omkhulu), ibutha ukuntweza okuhamba phambili emhlabeni minyaka yonke ukuqhudelana ekuhlolweni ezigabeni zabesilisa nabesifazane. Abagibeli abahamba phambili emhlabeni bavakashela le ndawo ukuze bancintisane futhi babonise wonke amathalente abo.
Kungomunye wemincintiswano elindelwe kakhulu yokuntweza olwandle kulo lonke elaseYurophu, ibamba abantu abangaphezu kwe-100.000 ngonyaka futhi inikela ngesibonelo esiyisisekelo esizungeza ngokuphelele ukuntweza olwandle, kusukela ezitolo zalo zezimpahla zokugqoka nezemidlalo, kuya ezitolo zalo zokudla kanye umculo. Iqiniso ukuthi yonke imisebenzi yabo ipholile kakhulu, ngoba kugcina kungumqhudelwano futhi ngasikhathi sinye kube ngumkhosi, onemisebenzi yezithonjana kubandakanya nokubhapathizwa kwabo okudumile kwe-surf.
I-O Marisquiño ingenye yemikhosi ebaluleke kakhulu yezemidlalo yasemadolobheni kanye nemidlalo yezenzo eYurophu selokhu yadalwa ngo-2001. Kungumkhosi wamahhala wezinsuku ezintathu ongaphandle, lapho abantu abangaphezu kuka-160.000 bejabulela khona imincintiswano eyishumi ephezulu yezemidlalo eyeqisayo, imibukiso yamasiko, i-gastronomy enhle kakhulu, imincintiswano yomdanso wekhefu, imiboniso yobuciko kanye neyegrafiti, amakhonsathi nokunye okuningi, konke eVigo Maritime Port, eduze kakhulu nesifunda esinomlando wedolobha.
Kugujwa kuphi i-O Marisquiño?
Umkhosi we-O Marisquiño kwenzeka endaweni engaphezu kwamamitha-skwele angaphezu kuka-150.000 eduze komlando waseVigo, lapho kwenziwa khona izivivinyo ezinkulu kakhulu zomkhosi, phambi nangasolwandle, ikakhulukazi ePaseo de las Avenidas, iTrasatlánticos Pier, iNautical kanye iBreakwater. Lapho izindawo zombukiso wezemidlalo namasiko ngamunye ziyakhonjiswa. Sekuwumcimbi ogqamile kuleli dolobha!
El Noma iMarisquiño Iqukethe izindebe zomhlaba ezintathu, iWorld Cup Skateboarding Street, iWorld Cup Skateboarding Miniramp kanye neDirt FMB World Tour, ezitholwa ngokuhlelwa komhlaba wonke, nalapho kuhlangana khona bonke abasubathi abaphambili, kuzwelonke nakwamanye amazwe. Muva nje, Ibhasikidi le-FIBA 3x3 selifakiwe phakathi kwezifundo futhi sebekhuphuke baya esigabeni seGolide seDirt Jump.
UGANDVALIRA WONKE ULWA
YiniI-Grandvalira Iyonke Yilwa?
IGrandvalira Total Fight ingenye yemincintiswano eshibilika eqhweni neyasimahla yeqhwa kazwelonke nakwamanye amazwe namuhla! Kuyindlela ye- ukuncintisana ngokweqile kuthakazelisa kakhulu ngoba ithalente, amaqhinga kanye nesitayela sokuqala sabancintisana kuyaphikiswa, ezigabeni zabesilisa nabesifazane.
Lo mqhudelwano weSlopown snowboard nowe-freeski ubanjelwe en I-Snowpark El Tarter (enye yePaki lamaphayona ePeninsula) Yadalwa ngo-2005 futhi isikhule kakhulu kusukela lapho. Eqinisweni, ngohlobo lwayo lwesibili luthola izinkanyezi ezi-3 kukhalenda ye-TTR (Ticket To Ride Tour), isifunda sokulinganisa ku i-snowboard emhlabeni jikelele.
Kepha futhi ukuthi ngo-2009, isifunda se-TTR samnika inkanyezi! Ngaleso sikhathi izinkanyezi zayo ezi-4 zabanga isasasa elikhulu emazweni omhlaba okubeka lesi siteshi Grandvalira emephini. Konke lokhu kuqondane nokufika kwabaningi nabagibeli ngezinga eliphakeme endaweni, ababefuna ukubamba iqhaza.
IGrandvalira Total Fight, umncintiswano omkhulu kunayo yonke we-freestyle eningizimu yeYurophu, ekugcineni ithola (ngo-2013) izinkanyezi zayo ezi-5 kusifunda se-TTR ku-snowboarding bese ingena Isigaba segolide kusifunda se-AFP, ireferensi yamazwe omhlaba in freeski.
Dakar Rally umzila: Kunjani?
Emashumini eminyaka amuva nje, iDakar Rally isibe ngomunye wemincintiswano yezimoto eyeqisayo neyingozi kulezi zikhathi zakamuva. Phambilini obizwa nge- "Rally Paris-Dakar", ngumncintiswano waminyaka yonke wezimoto we i-rally raid, ihlelwe yi-ASO (Amaury Sport Organisation) kusukela ngoDisemba 26, 1978.
Lapho uqala lo mncintiswano, umjaho ubuqala eParis bese ufinyelela umvuthwandaba ngamakhilomitha ayi-10.000 2019, enhlokodolobha yaseSenegal, eNtshonalanga Afrika. Yize ngokuhamba kwesikhathi iqala eBuenos Aires (e-Argentina), ekugcineni ngo-12 kwamenyezelwa ukuthi izobanjelwa eSaudi Arabia eMiddle East ngezigaba eziyi-7800, amakhilomitha angu-XNUMX XNUMX aphelelwe yisikhathi nokuhamba okungaphezu kuka-XNUMXkm. Sekuyiminyaka iDakar Rally ibonwa njengenye yemijaho yezimoto edinga kakhulu futhi eyinselele emhlabeni, lapho izimbangi zayo zikhombisa khona wonke umfutho wazo, isibindi kanye nethalente lezemidlalo phakathi kwezindawo ezinzima kakhulu emhlabeni.
I-UTMB T.I-RAIL RUNNING (I-ULTRA-TRAIL DE MONT-Blanc)
I-Ulta-Trail de Mont-Blanc idinga isingeniso esincane! Le marathon ephakeme edumile yenzeka minyaka yonke e-Alps, idlula eFrance, e-Italy naseSwitzerland, lapho izimbangi zayo ezingaphezu kuka-10.000 172 zihlanganisa ibanga elingaba amakhilomitha ayi-10.000 nomehluko omuhle wamamitha angaba ngu-7 XNUMX. Izicukuthwane zomhlaba zomzila zihlangana eChamonix minyaka yonke kanye nabanye abasubathi abagijimayo, ukuqhudelana emijahweni engu-XNUMX yomcimbi.
Injani iMontblanc UTMB Ultra Trail?
Njengamanje, i-UTMB yaziwa njengomjaho ofunwa kakhulu weTrail Running kuwo wonke futhi futhi ohlonishwa kakhulu. Uhlanga lonke lwenganekwane olumele isipiliyoni esiyingqayizivele! Iqiniso ukuthi ukujoyina Lo mjaho ozungeze iMont-Blanc, ngaphezu kwakho konke, ukuthuthuka komuntu okuvela ekujuleni ngaphakathi, lapho umzamo, ukuzinikela nomfutho kubaholela ekuweleni nasekunqobeni izintaba ezinhle kakhulu baze bafinyelele enjongweni yokugcina. Kuze kube manje, irekhodi le-ultratrail le-Montblac liphethwe ngu-Pau Capell, owayewine i-Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) emahoreni angama-20, imizuzu eyi-19 nemizuzwana eyisikhombisa.
UMKHOSI WOMHLABA WONKE WEZEMIDLALO EYEDLULA (FISE)
Lokhu mhlawumbe kungumncintiswano wezemidlalo we-freestyle obaluleke kakhulu kulo lonke elaseYurophu! Januwarikwethulwa yena uMkhosi Wamazwe Omhlaba Wezemidlalo Eqisayo (FISE) maphakathi nedolobha laseMontpellier, esifundeni iRives du Lez (eFrance), okuningi abasubathi ezigabeni ze-Bmx, i-skate, i-roller, i-skateboard, i-freestyle motocross, i-wakeboard, i-mountain bike slopestyle, i-slackline nebhayisikili lezintaba. Omunye wemicimbi yamahhala yamahhala eyenzelwe abathandi bezinto ezimbi kakhulu!
Isimo somncintiswano sijabule kakhulu, sinemikhosi futhi sinamacala amaningi nge-adrenaline, efinyelela izibukeli ezingaba ngu-550.000 kusipiliyoni sezinsuku ezi-5, esihlanganisa ngendlela emangalisayo umqhudelwano wezemidlalo owedlulele, amaphathi, i-gastronomy, ama-workshops wolwazi. ezemidlalo, amakhonsathi nokuzijabulisa okuningi kubathandi bezemidlalo eyeqisayo ne-freestyle.
I-FISEuzalelwe MontpellierA eningizimu yeFrance ngo-1997, kwathi ngo-2014, kwaqala i-FISE World Series, okwathi imicimbi yayo ehamba phambili kulo mqhudelwano yadluliselwa ezindaweni ezahlukahlukene emhlabeni.
Ithini iJungle Marathon?
Phakathi kwemijaho eyeqisa kakhulu futhi enzima kunayo yonke, ukuhola kuholwa ngu Jungle Marathon o I-Jungle Marathon.Umncintiswano okhethekile we abagijimi onesibindi futhi othanda ukwedlula bonke Kungani? Hhayi-ke, ngoba akuyona imarathon yalezo ezijwayelekile nezijwayelekile. Igujwa kanye ngonyaka e-Amazon yaseBrazil, indawo lapho kutholakala khona ngempela ubungozi behlathi.
Abancintisana abangama-75 bomjaho webanga elide phakathi nomncintiswano emazingeni okushisa aphezulu angawi ngaphansi kuka-40º nomswakama ongu-99%, ukuthi ngaphezu kokuwela imifula nama-alligator kanye nama-piranhas, futhi futhi babhekene nezimila ezinhle kakhulu ivumela ukukhanya okuncane kakhulu ukungena, futhi ifihla isilwane semitshina yokwethuka, kusuka ezinyokeni kuya kumajaguar. Yebo lokho kweqile, akunjalo?
IJungle Marathon, eyaqala ngokusemthethweni ngo-2003, ibanjwe ngezindlela ezintathu zamabanga amade: ushicilelo omfishane kunayo yonke ingu-42,2km, kodwa futhi ungahlanganisa ibanga elingu-127km elihlukaniswe izigaba ezi-4. Futhi-ke, inguqulo yayo ebanzi kakhulu ifaka umzila ohlanganisa amakhilomitha angama-254 esewonke, nezingxabano ngezigaba eziyisithupha.
Kulesi marathon esile, amakhono omzimba, engqondo nawokuqondisa kufanele abe sezingeni eliphezulu ukuze asinde kule adventure eyedlulele kwenye yezindawo zemvelo ezinhle kakhulu ezikhona, njenge-Amazon.
Into ethakazelisa kakhulu ukuthi ayikho inkambo echaziwe kulo mzila, kepha uma kuliqiniso ukuthi izimbangi zilinde izinsuku eziyisithupha ezinzima zezinselelo zabaculi kuze kube bayafinyelela umgomo wokugcina, lapho kufanele bathengele khona ukudla namanzi ngokwabo, Yakha izindlu zakho zokukhosela futhi ubhekane nazo zonke izithiyo ezikulindele ehlathini. Ungalokotha ubambe iqhaza kulo mncintiswano owedlulele?
ULWANDLE OTTER CLASSIC
Yini i-Sea Otter Classic?
Ungakhulumi kanjani nge-Sea Otter Classic! Omunye wemidlalo ehamba phambili ye-adventure yezemidlalo nemikhosi yokuhamba ngebhayisikili emhlabeni. Ibibanjwe kusukela ngo-1991 eFort Ord yakudala eMonterey County, California (United States). Yimidlalo esezingeni eliphakeme?
Umcimbi ubizwa nge- "Sea Otter Classic" ngokoqobo ukuhlonipha i-sea otter, edabuka kule ndawo. Ohlelweni lwayo lokuqala, lo mkhosi wamukele abasubathi abangama-350 nabanye ababukeli abayi-150. Njengamanje yamukela abasubathi abangaphezu kuka-9600 futhi yeqa abalandeli abangama-72.500 abahlangana ukuzofakaza ngokuhamba phambili kokuhamba ngebhayisikili futhi bajabulele izinsuku ezi-4 ezigcwele ukuzijabulisa emkhosini omkhulu wokuhamba ngebhayisikili emhlabeni.
Ukusuka ngo-1991 kuya ku-2002, iSea Otter Classic yenzeka ngenyanga kaMashi, kepha kwathi ngo-2003 yahambisa usuku lwayo kwaba ngu-Ephreli ukusizakala ngesimo sezulu esibi saseCalifornia.
Yini i-Sea Otter Europe Bike Show Giron?
Kukhona neSea Otter Europe Bike Show eGirona - Costa Brava eYurophu. Kusukela ngo-2017 ivela futhi iphefumulelwe yi-Sea Otter Classic. Mhlawumbe ingumkhosi webhayisikili ohamba phambili futhi obaluleke kunayo yonke wabasha abanethalente kanye nochwepheshe kwezemidlalo.
IBarkley Marathoni (Barkley Marathoni)
Yini iBarkley Marathon?
Kungenzeka ukuthi awuzwanga okuningi ngalo mqhudelwano we-adventure ongajwayelekile futhi onelukuluku lokwazi, kepha iBarkley Marathon nakanjani iyoba ngomunye wemicimbi yezemidlalo eyeqisayo, efunayo futhi engaqondakali emhlabeni wonke! Kuwo wonke umlando we-marathon, bangu-15 kuphela abantu abakwazile ukuqedela ngempumelelo uhambo lwabo oluyingozi nolunzima.
Yaqalwa ngonyaka we-1986 ngumakhi wayo uGary "Laz" Cantrell, owaziwa nje ngokuthi "iLake Lazarus". Kungumjaho webanga le-ultra-distance ongaphezulu kakhulu kwezimiso ezijwayelekile zama-marathons, eba umcimbi wokuqina nokuqina okwedlula konke emhlabeni.
Kungenzeka ukuthi usuvele wakucabanga, akuwona neze umjaho ovamile, futhi empeleni kuyaxaka, okokuqala ngoba ukubhaliswa kwayo kuyindlela eyimfihlo nenzima: kuphela nge-imeyili ngesikhathi esiqondile nosuku kumdali wayo (kuchaze izizathu kanye nekharikhulamu lakho lamakhono) ungathola noma ungalitholi ithuba lokuba ngomunye wabagijimi abanelungelo lokubamba iqhaza kokungajwayelekile IBarkley marathon. Ngaphezu kwalokho, kwenzeka ngosuku lwamasamanisi oluyimfihlo, endaweni engaziwa esifundazweni saseTennessee, e-USA.
Kungani iBarkley Marathon inzima kangaka?
Inhloso yeBarkley Marathon ukumboza ingqikithi yamakhilomitha ayi-160 ngethonsi eliqondile elingaphezulu kwamamitha ayi-20.000 60 esikhathini esilinganiselwe samahora angama-5. Umncintiswano unamathanga ama-XNUMX wokuhamba ngesikebhe mahhala, lapho ibanga libaluleke kakhulu khona. Ingxenye eyedlulele kakhulu ivela ekungalingani, isidingo sokuzulazula okuphelele nendawo endaweni, kanye nezimo ezingaziwa izimbangi ezingena kuzo, ngoba azazi ukuthi indawo injani noma ukuthi zizobhekana naziphi izimo zezulu.
Okujabulisa kakhulu futhi okuhehayo kulo mncintiswano kungophawu lokusinda nokuphila. Futhi ngukuthi ngaphezu kwalokho, ngenkathi uhamba emgwaqeni kufanele uzithole esikhaleni sokuqoqa amakhasi ezincwadi eziyi-14 ezifihliwe endaweni, nokuthi izimbangi kumele ziqale futhi zilethe njengobufakazi bokuthi bawenzile kahle lo mzila ngendlela efanele. Kuyathakazelisa kakhulu akunjalo?
Ngaphandle kokunikezwa ngaphambi kwesikhathi, noma usizo lwanoma yiluphi uhlobo, futhi kungekho zindawo zokuhlola, abagijimi abangamashumi amane bavele nje bahlangane nemvelo yabo ibhibhi, ikhampasi nokubuka ngaphandle kwe-GPS.Lokhu ukuphela kwento abayithola enhlanganweni ngaphambi kokuba baqale.
I-Barkley Marathon Netflix Imibhalo
Su ukuthandwa kwandile eminyakeni yakamuva, ikakhulukazi ngemuva kokwethulwa kuka-2014 kwe Umjaho Odla Ukuncane Kwawo (Umjaho Odla Ubusha), idokhumentari yeNetflix ehlaziya futhi ikhombise lo mncintiswano ongajwayelekile nowedlulele. Ungaba nesibindi sokuthumela i-imeyili eLake Lazarus Lake?
Ngabe ujwayele ukubona imincintiswano ngokwedlulele nemicimbi ye-adventure njengathi? Sitshele ukuthi yiziphi izintandokazi zakho!
Ukushibilika ngejubane eligcwele phansi emithambekeni yeColorado futhi uzwe umoya omsulwa ngenkathi ushibilika emithambekeni yayo emangalisa akufani. Ufuna ukwazi kabanzi ngokuhlangenwe nakho kokushushuluza kweColorado? Yebo